सीमा विवाद समाधानमा भारतले नेपालकाे प्रयास बेवास्ता गर्‍याे : परराष्ट्रमन्त्री
यस विषयमा सरकारलाई थाहा भएपनि नेपालका तर्फबाट पटक पटक भारतीय पक्षसँग छलफलका लागि भएका प्रयास सफल हुन नसकेको उनले बताए।
आइतबार संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यसबारेमा नेपालका तर्फबाट वार्ताका मिति प्रस्तावित गरेको र जुन सुकै तहमा पनि कुरा गर्न तयार रहेको जानकारी गराएपनि भारतले वेवास्ता गरेको उनले बताए।
ज्ञवालीले भारतीय पक्षले निर्माण गरको सडकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति संसदमा बाचन गरेर टेवल गरेका थिए।
संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुले सरकारलाई सडक निर्माणबारे जानकारी थियो कि थिएन भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले ६ महिना पहिले नै यस विषयमा संसदमा बोलेको तर सुनुवाइ नभएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगन थापाले भारतीय हस्तक्षेपको भत्र्सना गर्दै केही समय अघी रक्षामन्त्रीले त्यस क्षेत्रमा गरेको भ्रमण तीर्थ यात्रा थियो भन्दै प्रश्न गरे। ‘उहाँले सरकारलाई के बताउनुभयो ? सरकारले के ग¥यो ? नेपालले पश्चाताप गरेर मात्र बस्ने हो कि आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर प्रतिवाद गर्ने हो ?’ उनले भने। ‘भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिवाद गर्न नेपाली कांग्रेस र सिंगो नेपाली जनता तयार छन्। सरकारले हामीबाट के अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ,’ उनले भने ।
सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार खास खास घटनामा मात्र विज्ञप्ति जारी गरेर चुप लाग्ने गरेको आरोप लगाए। उनले जुन समस्या छ त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नियमितका प्रयास के भए भन्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।